Scojet waa shirkad design wax soo saarka, machining sax iyo wax soo saarka caalamiga keeno xal wax soo saarka gudaha iyo caalamiga ah in ay ganacsi iyada oo saarayaasha OEM waaweyn.
Scojet, Inc. furay albaabbadeedii oo sanadkii 2001 sida ganacsi design wax soo saarka, 2004 waxaan bilownay howlgallo our qayblibaaxna caalamiga ah, 2008 waxaan soo iibsatay makiinad CNC our ugu horeysay oo bilaabay howl our machining US, 2011, waxaynu ku bilaabay howlgallo machining aerospace our ee Maraykanka iyo helay AS9100 / caddeyn our ISO9001, 2015 ayaannu furnay Scojet Import Company dhoofinta Ningbo in Ninghai Shiinaha si ay u caawiyaan qeybiyeyaasha la horumarinta tayada, taageero injineernimada iyo ka dhigi sahaydu our si dhakhso ah oo wax ku ool ah.
Waxaan la caawinta shirkadaha la keeno waxyaabaha ay suuqa muddo ka badan 16 sano. celceliska Scojet ka badan 60 mashruuc oo sano ah ka fikirka in wax soo saarka beeraha sida aerospace, baabuurta, cawska iyo beerta, badeecooyinka iyo warshadaha caafimaad.
Scojet waa heer sare farsamo, ganacsi koritaanka dagaal badan leh taariikh mashaariic design iyo warshadaha guul hoos suumanka our.
Our shirkad ganacsi oo ku salaysan Shiinaha iyo la-hawlgalayaasheeda ay noogu suurto gasho in ay keenaan wax soo saarka ee caalamka in ay shirkadaha raadinaya inay u tartamaan suuqa caalamiga ah ee aan ka jira haatan. Qaar badan oo ka mid ah wada-hawlgalayaasha our ayaa sidoo kale ISO9001 certified oo dhan oo iyaga ka mid ah ayaa maray habka isreebreebka our.
CNC leexinta iyo axdi qarameedka of Alloys qalaad sida Rene, Inconel, Waspaloy & Titanium, Swiss Machining, Product Design, caaga / Rubber wax taaj oo kale, wayna saami Birta: Sand, Die iyo Investment, fiilooyinka Control Farsamada, Systems Light oo ay ku jiraan halogeenka iyo LED, Gurdanka iyo been birta.
Waxaana lagu siinayaa noocyada kala duwan ee wax soo saarka leh tayo sare iyo qiimaha wanaagsan. Waxaan nahay faraxsanahay si aad u hesho soo baara oo waxaan kuu jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan. Waxaan ku eekaan mabda'a "Tayada marka hore, adeegga ugu horeysay, horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo si ay ula kulmaan macaamiisha" Waayo, maamulka iyo "iin Zero, eber cabashooyinka" Sida Ujeedada tayada.